Afyare – Global Somali Diaspora
“Saamaynta COVID-19″ uu ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed ee Dalka Italy ku nool”.
ByAfyare	 July 16, 2020 August 22, 2020
Read More “Saamaynta COVID-19″ uu ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed ee Dalka Italy ku nool”.Continue
Barnaamijkan oo lugu falanqaynaayo “COVID-19 iyo Warbaahinta Soomaaliyeed”
ByAfyare	 July 16, 2020 August 4, 2020
Read More Barnaamijkan oo lugu falanqaynaayo “COVID-19 iyo Warbaahinta Soomaaliyeed”Continue
Maalmaha Muhimka ah ee Xuriyadda 26 Juun iyo 1da Luulyo. Cashar maxaan ka baran karnaa caqabadaha iyo fursadaha 60ka sano la soo dhaafay.
ByAfyare	 July 4, 2020 August 4, 2020
Read More Maalmaha Muhimka ah ee Xuriyadda 26 Juun iyo 1da Luulyo. Cashar maxaan ka baran karnaa caqabadaha iyo fursadaha 60ka sano la soo dhaafay.Continue